Maalmood free download, or read Maalmood online
• U sheeg dhakhtarkaaga wixii ah geedo/dhir, dawooyinka la iska iibsho warqad la'aan, fitamiino ama dawooyin dhakhtar soo qoray ee aad qaadatid. • Ha cabin khamri dhawr maalmood ka hor baadhitaanka.
qaadatid, qoray, dhakhtar, cabin, khamri
Waxa laga yaabaa in meesha lagaa qalay ay leedahay: * Tolmo iskeed u milanta ama u baaba'aysa. * Qabatooyin/sharootooyin kuwaasoo badanaa lagaa saari doono dhawr maalmood qalitaanka ka dib. * Qabatooyinka "Steri-strips" iskood ayay u soo dhici doonaan 7 ilaa 10 maalmood gudahood.
lagaa, qabatooyinka, qalitaanka, dhawr, steri
• Habsocodka jerm-la'aanta lagu sameeyo • Laynka dhexe ee dayac-tirka • Ficillada u baahan go'aamada kalkaalinta caafimaad Haddii oggolaansho hadal ah la helo, oggolaansho qoran ayaa la rabaa gudaheeda 30 maalmood laga bilaabo marka oggolaansha hadalka la sameeyo 15.
oggolaansho, sameeyo, rabaa, qoran, hadal
dkaaga looga saaray muddo 90 maalmood ah laguma celin doono kaydkaaga ilaa iney xaalado aan caadi . ahayn kula soo gudboonaadaan mooyaane. • Faa’iidooyinka cuntada ee aan la isticmaalin ee kay dkaaga looga saaray muddo 90 maalmood gudahood ah waxaa kaydkaaga lagu celin karaa oo keliya haddii ...
dkaaga, celin, muddo, saaray, looga
EDMONTON SOMALI VOICE (EDSOMAV) Somali-Canadian Cultural ...
Barnaamijka oo 5 maalmood socdey ayaa ka koobnaa dhowr qeybood oo dhamaantood ku saabsanaa arimaha dhallinyarada. Waxaa ka qeyb galayaasha la siiyey duruus wax ku
waxaa, dhallinyarada, galayaasha, siiyey, duruus
Somali-Canadian Cultural Society of Edmonton EDMONTON SOMALI ...
Camping oo lagu qabtay Elk Island Park ayaa socday 3 maalmood oo ka bilaabatay galbatii Jimcaha, August 7, 2009 dhamaadayna galabtii Axadda, August 9, 2009.
august, dhamaadayna, galabtii, axadda, jimcaha
Waxay qaadan kartaa 2-4 maalmood si aad u hesho jawaab-celin email ah. Ka eeg website-keena ah www.parentline.org.au The printing of this issue of Ma Ogtahay is supported by funding from the Australian Government Attorney-General's Department under its Building Community Resilience Grants program.
attorney, general, government, australian, funding
Asylum Seekers Guide - client version (Somali)
Haddiiaadgo'aan aqbalaadahkaheshidcodsigaagamagangalyo, taageeradaaadheshid NASS waxayku joogsandoontaagudaha 28 maalmood. Waxaaadumuhiimah in aadsidaugudhakhsaha badaneesuurogalka ah ucodsatidgargaarkadawladda (benefits).
aadsidaugudhakhsaha, badaneesuurogalka, ucodsatidgargaarkadawladda, benefits, waxaaadumuhiimah
Xagga jidhka waa laga dilay, laakiinse xagga ruuxa waa laga nooleeyey" (1 Butros 3:18) "Markuu xanuunsaday dabadeed, iyagii ayuu isagoo nool waxyaalo badan oo la hubo isugu muujiyey, oo muddo afartan maalmood ah ayuu i yagii u muuqday, oo kala hadlay waxyaalaha ku saabsan boqortooyada Ilaah" (Falimaha ...
xagga, yagii, afartan, muujiyey, muuqday